Fiverenana an-tsehatra :: Nakotrokotroka ny seho nataon’i Poopy • AoRaha
Fiverenana an-tsehatra Nakotrokotroka ny seho nataon’i Poopy
Tsy niova. Tahaka an’ilay Poopy farany tao amin’ny kapan’ny Kolontsaina sy ny Fanatanjahantena Mahamasina, taona vitsy izay ihany, ny feo sy ny fiantsehatra nentiny omaly. Nafana ny fiarahana, tamin’ireo mpankafy tonga nanotrona azy.
Na ny haingon-tsehatra na ireo soradihy niarahana tamin-dry Dihvin, dia nahatalanjona avokoa. Naverin’ i Poopy tao
anatin’ireo fotoana rehetra nampamiratra ny mozikany ny mpijery.
Nozaraina telo ny fiakarana an-dampihazo. Nifanesy avokoa ireo hira maro hatramin’ireo izay efa nahazo taona. Toa mamerina an-tsaina ilay fiangaliana soradihy tamin’ireo fetin-tsekoly fony fahazaza ireo hira nifanesy. Horakoraka sy tehaka hatrany no nasetrin’ireo mpanatrika izay hira nataon’i Poopy.
Niavaka manokana ny tsiaro an’i Dadah sy Fafah, tao anatin’ilay hira “Miara-mihira”. « Isan’ny mpanakanto nitondra mozika miavaka sy nanamarika ny fiainako tamin’ ny maha mpihira ahy izy », hoy i Poopy sady latsa-dranomaso. Noredonina niaraka tamin’ireo mpijery ity hira ity.
Nifandimby ihany koa ny fampiaraham-peo, « Fitia voarara » niarahana tamin’i Mahery, « Tena Namana » niaraka tamin’i Éric Tahiana. Tonga nanampy an’i Poopy ihany koa i Inah, izay mpanakanto isan’ny novolavolainy. Efa nifanome fotoana amin’ilay seho « Mifampitantana » manaraka sahady i Poopy sy ny mpankamamy ny mozikany.
Fahatsiarovana mpahay tantara :: Namela fahalalana goavana momba an’i Madagasikara ry Domenichini
Fifidianana kaominaly :: Hanomboka anio ny fandefasana an’ireo fitaovana any amin’ny faritra